Colombia - Ihe kpatara ị ga - eji leta obodo a | Njem zuru oke
Colombia bụ obodo dị n’akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ nke Ebe Ndịda America. Isi ya bụ Bogotá na ọ na-abụkarị isi okwu mbụ ọ gara. N'ime ya anyị nwere ike ịga na etiti akụkọ ihe mere eme, gbagoo Cerro de Montserrate, kwụpụ na Plaza de Bolívar ma ọ bụ nwee ọ museụ itsụ ya.
Mgbe otu n’ime obodo ndị kachasị mma anyị ga-ahụ na Colombia nwere aha Barichara, nwere gburugburu oke okike na n’etiti ugwu, nwere okporo ụzọ dị warara. N’ezie, anyị enweghị ike ichefu obodo Cartagena de Indias nke nwere mgbidi, nwere ụlọ ndị nwe obodo yana okporo ụzọ ejiri okwute mee.
Ebe nkwụsị ọzọ bụ Medellín, site na nke anyị ga-esi na etiti ya na Plaza Botero. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ Obí nke Omenala na ebe ngosi ihe mgbe ochie ya. N’agaghị echefu Basilica nke Nwanyị Nwanyị Candelaria anyị. Iji gbakwunye ụcha agba, anyị nwere obodo ọzọ a na-akpọ Guatapé, nke dị nso na ọdụ mmiri ahụ.
Ebe a maara dị ka Eje Cafetero ekwesịghị ịhapụ n'akụkụ. ọtụtụ Okirikiri ala jikọtara na obodo nwere ọtụtụ ihe inye dị ka Salento ma ọ bụ Filandia na Manizales. Na nke ikpeazụ ị nwere ike ịnụ ụtọ Towerlọ Elu Saịprọs na ịrịgo Katidral ahụ, site na ebe ị ga-enwe echiche panoramic kacha mma.
por Daniel eme 1 ọnwa .
Novena de Aguinaldos bụ otu n'ime ọdịnala Krismas kachasị mkpa ma gbanye mkpọrọgwụ na Colombia. Ọ dịkwa oke…
Cumbia, ụda ọdịnala nke Colombia
Obi abụọ adịghị ya na ụda olu egwu kachasị jikọọ na Colombia, ọdịbendị ya na ndị ya, bụ cumbia. Enweghị…
Nnụnụ na Amazon Rainforest
Ndị ornithologists na ndị hụrụ ihe okike n'anya n'akụkụ ụwa niile agaala South America ruo ọtụtụ iri afọ ...
Omenala na ụkpụrụ ụlọ nke Popayán
por maruuzen eme 1 ọnwa .
Latin America nwere ebe magburu onwe ya na Colombia na-etinye ụfọdụ n'ime ihe kacha mma. Ọmụmaatụ, Popayán, otu n'ime ndị kasị ...
Ọrụ nke nna ukwu Alejandro Obregón
por Daniel eme Ọnwa 4 .
A na-ahụta Alejandro Obregón dị ka otu n’ime ndị isi America na-ese ihe na narị afọ nke XNUMX. E toro ndị o kere eke ogologo oge ...
Akụkọ ifo na Churumbelo Waterfall
Anyị gara n'ebe ndịda nke Colombia, kpọmkwem na Ngalaba Putumayo, iji zute otu n'ime ebe kachasị mma ...
por Isabel eme Ọnwa 5 .
Otu n'ime ihe ijuanya ndị njem na-eleta Colombia na nke mbụ ya bụ otu nke ya ...
Ndị Colombia na-a drinkụ ihe ọ drinkụ ,ụ
por Colombia zuru oke eme Ọnwa 5 .
Mba ọ bụla nwere mmanya ma ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ nke ha. Otu nke si na Colombia bu brandi, obi abụọ adịghị ya na mmanya na-egbu egbu ...
Otu n'ime akụ dị ukwuu nke mmepe-mbụ nke Columbian dị na Colombia dị na Tierradentro National Archaeological Park….
por Daniel eme Ọnwa 6 .
Enwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji gaa agwaetiti San Andrés, Providencia na Santa Catalina, ebe njedebe nke mmiri na mmiri nke ...
Kondor nke Andes, nnụnụ mba
Condor nke Andes bụ otu n’ime anụmanụ kacha egosipụta na South America. Nnụnụ a dị ebube bụ ...
Cumbia, nnọchiteanya nke Colombia
Nke a bụ otu esi si nweta nnwere onwe nke Colombia
Njirimara nke enyemaka Colombia
Ahụkarị efere nke mpaghara Amazon
Uwe ejiji Colombia
Achịcha nri nke mpaghara Caribbean
Ahụkarị efere nke mpaghara Andean
Bandeja paisa, nke a bụ nri kachasị na Colombia
Isi obodo nke Colombia